Wararkii ugu dambeeyay Ololaha Mooshin laga wado Guddoomiye Muudey – XAMAR POST
By Zakariye iiman On Jun 8, 2019
Ololaha Mooshinka laga diyaarinaayo Gudoomiye ku xigeenka Koowaad ee Golaha Shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey ayaa si weyn u xoogeystay , waxaana socda kulamo Madaxtooyadda ay ku leeyihiin xildhibaanada Mooshinka wadda.
Gudoomiyaha Muudey ayaa lagu waddaa in uu si deg deg ah dalka ugu soo laabto si uu dhankiisa u bilaabo is difaacida, maadaama laga waddo Mooshin aan wali soo shaacbixin.
Ololaha Mooshinka ayaa wararku waxa ay sheegayaan in ay waddaan xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka.
Ilo kalsoonaan karo ayaa xamar post u sheegay in guuxa Mooshinka uu soo bilowday tan iyo markii Golaha Shacabka la horkeenay sharciga doorashooyinka.
Ololaha Mooshinkaan ayaa si xowli ah ku socda, waxaana la sheegay in aan wali si rasmi ah loogu dhawaaqin meelmarintiisa, islamarkaana wali ay socdaan tashiyo ay waddaan xildhibaanada Ololaha Mooshinka wadda iyo Mas’uuliyiin daba ka riixaysa.
Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey ayaa haataan ku maqan dalka Turkiga, iyadoo la rumeysan yahay inuu xilligan awood ku leeyahay Baarlamaanka, waxaana la xusuustaa doorkii uu ku lahaa ridistii Guddoomiye Jawaari.